सामान्य ज्ञान | Ratopati
personरातोपाटी exploreकाठमाडौं access_timeमाघ १८, २०७५ chat_bubble_outline0
Image source: InsideIIM.com
० डा. इभानोभिच मेण्डलीफको जन्म सन् १८३४ फेब्रुवरी १ तारिखका दिन रुसमा भएको थियो । उनले तत्त्वको गुण र तिनको परमाणु भारको साथै पेरियोडिक तरिकाले बदलिरहन्छन् भन्ने सिद्धान्त स्थापना गरी पेरियोडिक टेबल बनाएका थिए ।
० कमनवेल्थ खेलकुद प्रतियोगिता राष्ट्र मण्डलका सदस्यहरुबीच खेलिन्छ । यो प्रतियोगिता सन् १९३० देखि प्रत्येक चार वर्षको अन्तरालमा आयोजना हुन्छ ।
० एसियाली विकास बैंक (ADB) को स्थापना सन् १९६६ मा भएको थियो । यसको प्रधान कार्यालय मनिलामा रहेको छ ।
० कोराकोम नामक राजमार्गले भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान र रुसलाई जोड्ने काम गर्छ ।
० एसियाको नोबेल पुरस्कार भनेर चिनिने रेमन मेगासासे पुरस्कारको स्थापना सन् १९५८ मा गरिएको थियो । यस पुरस्कारको रकम ३०,००० अमेरिकी डलर र एउटा स्वर्ण पदक रहेको छ । सार्वजनिक सेवा, सरकारी सेवा, सामुदायिक सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय सद्भावना र समझदारी तथा कला, साहित्य गरी जम्मा ५ क्षेत्रमा यो पुरस्कार प्रदान गरिन्छ । यो पुरस्कार सन् १९५७ मा हवाइजहाज दुर्घटनामा मृत्यु भएका फिलिपिन्सका भुतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मगासासेको सम्झनामा स्थापना गरिएको हो ।
० लिंकनपछिका लोकप्रिय मानिने अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको सन् १९६३ नोभेम्बर २२ का दिन टेक्सस राज्यको डलास भन्ने स्थानमा हत्या भएको थियो ।
० विश्वको सबैभन्दा ठूलो ताल क्यास्पियन सी हो । यो रसिया–इरानमा अवस्थित रहेको छ । यसको क्षेत्रफल ३९४२९९ वर्गा किलोमिटर रहेको छ । यसको लम्बाई ११९९ कि.मी. र गहिराई ९४६ मिटर रहेको छ ।
० विहारको दुःख भनेर कोशी नदीलाई चिनिन्छ । त्यसैगरि बङ्गालको दुःख भनेर दामोदरी नदीलाई चिनिन्छ ।
० जरासन्ध महाभारतमा अत्याचारी राजाको रुपमा देखाइएको छ । यिनलाई पाण्डवका भीमले महाभारत लडाइँ हुनुभन्दा धेरै अगाडि खुट्टा च्यातेर मारेका थिए ।
० शनिवारका दिन विदा लिने चलन भीम शमशेरले चलाएका हुन् ।
० चन्द्रमाको उत्पत्ति, गति, कला र स्थान परिवर्तनबारे अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई सेलेनोग्राफी (Selenolography) भनिन्छ भने चन्द्रमाको बारेमा अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई भने सेलेनोलोजी (Selenology) भनिन्छ ।
आपत परेको बेलामा मद्दत नगर्ने हो भने साथीको के काम ?
कोभिड-१९, लकडाउन र विद्यार्थीको दैनिकी
ती साँच्चैका स्नातक हुन् जो विदेशबाट फर्के
लकडाउनमा मेरो अनुभव
सेनासँग बाक्लियो प्रधानमन्त्री ओलीको भेटघाट
सुनको मास्कमा रमाउँदै शंकर
नेकपाको सत्ता संघर्षले काँग्रेस पनि तरंगित : अरुको विवादमा पार्टीको कित्ता क्लियर नहोस् !
ललितपुरका ५ स्थानमा आकाशेपुल बनाउने तयारी
सुनचाँदी गरगहना परिक्षणका लागि दिइयो प्राविधिक तालिम
६०० नेपाली स्वदेश फर्किए
टेकु क्षेत्र वरिपरि एभरेष्ट बैंकद्वारा वृक्षारोपण